Indian Oil Company Invest Additional $120 Million in the Shwe Gas Project | Myanmar Business Today
HomeBusinessIndian Oil Company Invest Additional $120 Million in the Shwe Gas Project
India’s ONGC Videsh Ltd (OVL) will invest over $120 million in the Shwe Gas project, according to the Financial Express.
The investment proposal was approved by the cabinet meeting held by the Indian Prime Minister.
ONGC Videsh Ltd (OVL), an overseas investment subsidiary of ONGC, has made $722 million in the Shwe project as of March last year.
The company decided to invest more as the project has been generating profit since the 2014-15 Fiscal Year.
Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) conducted the exploration and development of the Shwe gas project in collaboration with companies in Myanmar and Korea.
Korea’s Posco International (Daewoo) served as the operator of the project, holding 51 percent while Myanmar Oil and Gas Enterprise holds 15 percent, India’s GAIL 8.5 percent, ONGC 17 percent, and Korea Gas Corporation 8.5 percent.
Gas production at the Shwe Gas project kicked off in 2013, producing up to 500 million cubic feet and exporting them to China.
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရွှေသဘာဝဓာတ်ငွေ့စီမံကိန်းတွင် ဒေါ် လာသန်း ၁၂၀ ကျော်ကို အိန္ဒိယ ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သော ONGC Videsh Ltd (OVL) က ထပ်မံရင်း နှီးမြှုပ်နှံလိုက်ကြောင်း Financial Express သတင်းဌာနက ဇွန်လ ၂၇ ရက်နေ့ ဖော်ပြချက်အရသိရသည်။
ဝန်ကြီးချုပ်ဦးဆောင်သော အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးအပြီးတွင် ထပ်မံရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း လည်းသိရသည်။ ယင်း ONGC Videsh Ltd (OVL) ကုမ္ပဏီသည် မြန်မာနိုင် ငံတွင် ၂၀၁၉ မတ်လ ၃၁ ရက်အထိ ဒေါ်လာ သန်း ၇၂၀ ကျော် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားပြီးဖြစ် သည်။
ONGC Videsh Ltd (OVL)ကုမ္ပဏီကို မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရေနံနှင့် သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့စီမံကိန်းဖွံ့ဖြိုးရန် အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်က ပြီးခဲ့သည့်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
၎င်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသည့် ရွှေသဘာဝဓာတ်ငွေ့စီမံကိန်းတွင် ၂၀၁၄-၁၅က စတင်ပြီး အမြတ်အစွန်း ရရှိထားခြင်းကြောင့် ယခုလို ထပ်မံရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရသည်။ Oil and Natural Gas Corporation (ONGC)သည် မြန်မာနိုင်ငံ ရွှေသဘာဝဓာတ်ငွေ့စီမံကိန်းတွင် တောင်ကိုရီးယား၊ မြန်မာနှင့်အတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေခြင်းဖြစ်သည်။
အိန္ဒိယအစိုးရပိုင် ရေနံနှင့် သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့ကော်ပိုရေးရှင်း (ONGC)၊ မြန်မာ့ရေနံနှင့် သဘာ ဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်း (MOGE)၊ Gail(India)ကုမ္ပဏီနှင့် ကိုရီးယား ဂတ်စ် ကော်ပိုရေးရှင်းတို့ကလည်း ယင်းစီမံကိန်း၌ အချိုးကျပါဝင်သည်။
ရခိုင်ကမ်းလွန် ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ လုပ်ကွက်များဖြစ်သည့် A-1 နှင့် A-3 ရှိ ရွှေသဘာဝဓာတ်ငွေ့စီမံကိန်းမှ ရွှေသဘာဝဓာတ်ငွေ့ကို၀၁၃ ခုနှစ်တွင် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ စတင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှစတင်ကာ အမြင့်ဆုံးထုတ်လုပ်မှုနှုန်းဖြင့် နေ့စဉ် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ကုဗပေ သန်း ၅၀၀ ထုတ်လုပ်ကာ တရုတ်နိုင်ငံသို့ တင်ပို့ရောင်းချလျက်ရှိသည်။
ရခိုင်ကမ်းလွန်ရှိ ရွှေသဘာဝဓာတ်ငွေ့စီမံကိန်းတွင် တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှ Posco International (Daewoo) ကုမ္ပဏီက ၅၁ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် အော်ပရေတာအဖြစ် လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည်။
KOGAS က ၁၇ ရာခိုင်နှုန်း၊ မြန်မာ့ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်းက ၁၅ ရာခိုင်နှုန်း၊ ONGC ‌နှင့် GAIL တို့က ၈ ဒသမ ၅ ရာခိုင်နှုန်းစီ ပါဝင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသည်။
Previous articleLocal Oil Mill Holds only5% of Market Share
Next articleLocal Gold Prices Likely to Rise Gradually